Loop & Tie: I-B2B yokufikelela kwizipho ngoku yiNkqubo yokuThengisa kwiNdawo yeNtengiso yeAppExchange | Martech Zone
I-Loop & Tie: I-B2B yokufikelela kwizipho ngoku yiNkqubo yokuThengisa kwiNdawo yokuThengisa yeApple
NgoLwesihlanu, Matshi 26, 2021 NgoLwesihlanu, Matshi 26, 2021 Douglas Karr
Isifundo endisaqhubeka ukusifundisa abantu kwintengiso ye-B2B kukuba ukuthenga kusekho siqu, naxa usebenza nemibutho emikhulu. Abenzi bezigqibo bachaphazelekayo kwimisebenzi yabo, amanqanaba oxinzelelo, umthamo wabo womsebenzi, kwanokonwaba kwabo kwemihla ngemihla emsebenzini wabo. Njengenkonzo ye-B2B okanye umboneleli wemveliso, amava okusebenza nombutho wakho aya kuhlala ekugqwesa okwenziweyo.
Ukuqala kwam ukuqhuba ishishini lam, ndothuswa yile nto. Ndijonge kuphela ingqalelo yam kwizinto ezinokubonelelwa ngeshishini ukuze ndiliphucule. Ndandihlala ndothuka njengoko abathengi benxibelelana ukuba sihamba ngokukhawuleza okukhulu okanye sisenza utshintsho oluninzi. Ngokuhamba kwexesha, ndiye ndaqala ukujonga indlela endinokubonelela ngayo ngexabiso kumbutho wabo ngaphandle kokuhanjiswa kweengxelo zethu zomsebenzi. Indawo enye yayizizipho… izikhumbuzo ezinengqiqo zokuxabisa ukukhanyisa usuku lwabo.
Abanye babenabantu, abanye babenxulumene neshishini. Xa omnye wabathengi bam efudukela kwindawo entle entsha, ndabathengela indawo yokuthengisa ikofu enye. Xa omnye wabathengi bam asungula ipodcast, ndibathengele ikhamera yevidiyo. Kwesinye, ndithenge amatikiti kumnyhadala wesisa apho umqeqeshi weNFL wayethetha khona. Xa omnye wabathengi wayenomntwana wabo wokuqala, ndathenga into entle kuluhlu lwabo lweminqweno.
Isipho yindlela elungileyo yokuguqula amava omsebenzisi, kodwa kufuneka yenziwe kakuhle. Xa ndisebenza kwiphephandaba lommandla, ndibukele isebe lentengiso likhupha amatikiti asenkundleni kubathengisi abakhulu. Kwakungekho isipho, ikhule ilindelwe. Izipho zenzelwe umntu kwaye zinokuguqula ubudlelwane.
Ndivulekile kwaye ndinyanisekile kubaxhasi xa bendibulela ngokuba, ekugqibeleni, basihlawulele isipho ngeli thuba bandinike lona.
ILoop kunye neTie liqonga lokuzibandakanya elinceda amashishini ukunxibelelana nabathengi ngobugcisa bezipho. Iqonga lesipho esisekwe ekukhetheni lithumela ulonwabo kunye nemvo yokuxabisa ebalulekileyo kulwalamano lwabathengi oluhlala ixesha elide. Ndenze udliwanondlebe nomsunguli wabo, USara Rodell, Kwipodcast yethu.
Ukusukela ngo-2011, iLoop & Tie itshintshe indlela amashishini acinga ngayo ngezipho. Ukuphazamisa i-125B yecandelo lezeshishini lokunika izipho, iqonga lesipho esisekwe ekukhetheni livumela amashishini athabathe indawo yomhla wokuthumela isithukuthezi esifanayo, ubungakanani obulingana nesipho kubo bonke abantu.
Endaweni yokuba abathumeli benze ingqokelela yezipho ezikhethiweyo kunye nezinto ezivela kumashishini amancinci angaphezulu kwama-500. Abamkeli ke bakhetha into abayithandayo okanye bakhethe ukunikela ngexabiso layo kwisisa, besenza ukuba isipho sitshintshe sibe ngumthombo omtsha wedatha kunye nonxibelelwano.
Ukutyelela iLoop kunye neTie
I-Loop kunye neTie Salesforce App kwi-AppExchange
ILoop kunye neTie isungule usetyenziso olutsha lwe lesforce. Ngeqonga lezipho lomthengi kaLoop & Tie, abasebenzisi banokuthumela isipho esinye okanye ezingama-10,000 kwimizuzu nje embalwa. Ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa kwi-AppExchange, abasebenzisi banokufaka ngaphandle komthungo usetyenziso kwi-Salesforce yabo kwaye baqale ukuthumela izipho kubathengi nakubathengi kwangoko.
KwiLoop & Tie, sihlala sicinga ngeendlela esinokuthi siwasebenzise ngayo amandla etekhnoloji ukunceda abantu abaninzi ukuba banxibelelane. Umtsalane esiziva ukuba siyawaqonda kwaye siwubhiyozela omnye nomnye ngokunikezela zizipho ezintle, ezingaphelelwa lixesha. Ngokubonelela abasebenzisi beSalesforce ukuba bakwazi ukuthumela izipho ngokuthe ngqo kwisicelo sabo, sinokuxhobisa ngokukhawuleza amava eziphiwo ezihambelana nabantu kwiinkampani.
USara Rodell, uMseki kunye ne-CEO yeLoop & Tie
Abasebenzisi beLoop kunye neTie abanomdla wokubopha iCRM yabo kwizipho ezibandakanya ukubandakanyeka ngoku banokuxhomekeka kwiNtengiso njengesiseko sabo sasekhaya sokulandela ubudlelwane kubathengi kunye nokufikelela. Ngokudibanisa izipho njengesixhobo sokuzibandakanya ngaphakathi kweNdawo yokuthengisa, iLoop kunye neTie inceda abasebenzisi ukuba baphucule ukufikelela kwabo kubathengi ngotshintsho olubonakalayo nolungalibalekiyo.
Iqonga lesipho leLoop & Tie lenza amava abathengi anentsingiselo kwimephu kwiimfuno zeshishini zokukhula kunye nokulandela umkhondo. Ukwakha ngaphakathi kwe-Salesforce kunceda iinkampani ukuhambisa ukuchukumisa okunqabileyo okulilitye lembombo lobudlelwane obomeleleyo, konke ngaphakathi kwesakhelo esinokulandelwa esinceda abathengi ukulinganisa i-ROI yeenkqubo zabo zezipho.
I-Loop & Tie ibonelela ngamava abathengi abahlukeneyo awakha ubudlelwane obuhlala ixesha elide kwaye amaqela eedatha kufuneka aqonde ukusebenza kwephulo, konke kwiqonga loluntu elaziyo, ngokunika izipho, exhasa uluntu olwahlukeneyo, abathengisi bamashishini amancinci.
Jonga uLoop kunye neTie kwiAppExchange
tags: etshintshib2b iziphoukufikelela kubathengiCRMUkufikelela kubathengiInkqubo yesiphoUkuba nesiphiwoIcebo lesiphoiluphu kunye neqhinailuphu kunye neqhinaukufikelelaukuthengisaUSara rodell
Kutheni iiVidiyo zakho eziHlanganisiweyo ziphosa uMark, kwaye kufuneka wenze ntoni ngayo
Yintoni iMarTech? Itekhnoloji yeNtengiso: eyadlulayo, yangoku kunye nekamva